Can't Install Simpe Compiz Setting Manager on Ubuntu 11.04 - MYSTERY ZILLION
Can't Install Simpe Compiz Setting Manager on Ubuntu 11.04
luciferglenn May 2011 edited May 2011 in Ubuntu Ubuntu 10.10 မှာတုန်းကတော့ ပြဿနာမှမရှိပါဘူး။ ခု 10.10 ကို ပြန်ဖြုတ်ချပြီး ခု 11.04 ပြန်တင်လိုက်တော့မှ ယခုလိုပုံ ပေါ်လာတာပါ။ သိရှိသူများရှိရင် ကူညီကြပါဦး ခင်ဗျား။ Tagged:
saturngod May 2011 Administrators it's using unity ui. So, compiz setting manager can't be use. Compiz setting manager is using in Gnome. Ubuntu 11.04 change gnome to unity UI. So, can't use compize setting manager in Ubuntu 11.04. MaungZin May 2011 edited May 2011 Registered Users Ubuntu 11.04 သုံးမယ်လို့ စိတ်ကူးရှိရင် ဖြစ်ဖြစ် - လတ်တလောမှာ သုံးနေရင် ဖြစ်ဖြစ် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပို့စ်တွေကို မဖြစ်မနေ ဖတ်ထားသင့်ပါတယ်။ http://www.omgubuntu.co.uk/?p=13649http://www.techdrivein.com/2011/04/12-things-i-did-after-installing-new.htmlhttp://www.webupd8.org/2011/04/things-to-tweak-fix-after-installing.htmlhttp://www.webupd8.org/2011/04/how-to-remove-mounted-drives-from.htmlhttp://www.omgubuntu.co.uk/2011/04/10-things-to-do-after-installing-ubuntu-11-04/http://www.unixmen.com/linux-tutorials/linux-distributions/linux-distributions4-ubuntu/1540-top-things-to-do-after-installing-ubuntu-1104-natty-narwhalhttp://www.techdrivein.com/2011/04/31-useful-ubuntu-1104-unity.htmlဖော်ပြပါ နေရာတွေက ပို့စ်တွေအားလုံးကို ဖတ်ပြီးသွားရင် လတ်တလောရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာ တစ်ချို့နဲ့ တစ်ခြား ဖြစ်လာနိုင်မယ့် မကျေလည်မှု တစ်ချို့ကိုပါ ပြေလည်စေပါလိမ့်မယ်။ကိုမောင်ဇင်။ luciferglenn May 2011 Registered Users ကျေးဇူးပါ အကိုတို့ ခင်ဗျား.. Ubuntu ခုမှစသုံးဖူးလို့ပါ.. Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla